मेरो भोगाईमा युरोप – Tandav News
मेरो भोगाईमा युरोप
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ फाल्गुन २३ गते बिहीबार १४:१४ मा प्रकाशित
आमा मेरो युरोपको भिसा लाग्यो नि । मैले भिसा लागेको थाहा पाएपछि पहिलो पटक यहि शब्द आमालाई भनेको थिएँ । म त खुसी थिए तर आमा सुक्कसुक्क गर्न थाल्नु भयो । सोधे, ‘के भो आमा ?’ आमाले आँसु पुछ्दै भन्नु भयो, ‘बाबु बिदेश जानी मात्र हैन् मेरो गोत बाटै जाने भइस ।’ भर्खर सम्म खुसी बनेको मन एकाएक अमिलो बन्यो ।
बाबुआमाका दुई सन्तान हामी सानो भाइ । बाबुको राम्रो जागिर थिएन । बाबालाई पनि भिसाको कुरा सुनाए । बाबाले पनि मन गरुंगो पार्दै लौ जाती भो भनेको अझै पनि कानमा गुन्जिएकै छ । दशैको सप्तमीको दिन होला सायद भिसा लागेको । प्राय आफन्तले थाहा पाउनु भएको थियो । तर साथी सर्कल कसैलाइ भनेको थिएन ।
दशैको बेला टीका लगाउदा भनेको थिए, ‘अब टीका पाँच वर्षपछि लगाम्ला ।’ सायद त्यो घरको रुवाइले पोलिरहेको छ आज सम्म पनि । जसो तसो गहना बेचेर, ऋण काडेर युरोप हिन्ने दिन आयो । मन भारी बनाएर निस्किए । सपनाको सहर युरोप ।
युरोपको दुःख ः
एयरपोर्टमा झरे पछि लाग्यो अब केही होला तर मन तेसै आत्तिएको थियो । नजानेको ठाउँ , भाषा, संस्कार सबै सम्झदा मन पोल्दै थियो । जसोतसो दुखैले बस्ने ठाउँको जोहो पनि लाग्यो । पढन भनेर आएको छोरो कलेज जाने कुरा सहज रह्यो तर जब सुत्न थाल्छु झस्काउँछ घरको ऋण अनि ब्याजले । दिनहुँ बढेको ब्याज आएको एकमहिना पुग्यो काम कतै पाइएन । मन रोएको छ । आत्तिएको छ । किन लागे विदेश भनेर मनले मनलाई प्रश्न गर्न थाल्यो ।
एकदिन बाटोमा हिन्दै थिएँ । एउटा बार मा भ्याकेन्सी भनेर लेखेको देखे । के रैछ भनेर बुझ्न मन लाग्यो । डर पनि लागिराखेको थियो, अग्रेजी बोल्छन कि नाइ भनेर । रिसेप्सनमा एउटी खैरिनी बसेकी थिई । सोधे, ‘ हुइच्च टाइप अफ पिपुल यु निड ?’ ठाडो उत्तर दिइन्, ‘फर किचन’
फेरी सोधें, ‘क्यान आइ टल्क विथ म्यानेजर ?’ उसले ‘वयट’ भनी । केही बेरमा एउटा मोटे भुँडे बाहिर आयो । मैले उहि प्रश्न तेर्साए । जवाफ पाए ‘डिसवासर’ । काम नपाएर हल्लिनु भन्दा यहि काम ठीक छ भन्ने मलाई लाग्यो । ‘क्यान आइ गेट दिस् जब ?’ भन्न नपाउँदै उसले मलाई प्रश्न गर्यो, ‘डु यू ह्याव एनी एक्सपेरिन्स ?’
मन झसङ भयो । त्यहाँबाट नसमस्तक भएर कोठामा फर्के । ढोका थुनेर चर्कोसँग रोएँ । घर (नेपाल) हुँदा थालमा चुठेर हिनेको बानी, कसरी दिउँ अनुभवको प्रमाणपत्र । यहाँ रोएर कराएर हुने केही पनि थिएन । संघर्ष गर्नु नै छ, भोग्नु नै छ । आफूले आफैलाई बुझाउने प्रयास गरे ।
भोलिपल्ट सयप्रती सर्टिफिकेट प्रिन्ट गरेर हरेक ठाउँमा बुझाउदै हिंडे । अनलाइन एपलाई धेरै गरें तर कतैबाट पनि रेस्पोन्स आएन । एकचोटी विदेश सम्झेर थुक्क भन्न मन लायो ।
यस्तैमा एक दिन फेरी भाडा धुने काम भेटियो । त्यसैमा फाइनल भयो र काम गर्न थाले । काम त सुरु भो तर कलेजको समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन थाल्यो । हप्तामा २० घन्टा भन्दा काम गर्न नपाइनी । आफूले के खानी के लाउनी । इन्सुरेन्स, यातयात कसरी धान्ने ?
यो मेरो मात्र हैन युरोपको जुनसुकै देशमा पुग्ने नेपालीहरुको बाध्यता नै हो । यहाँ कसैले कसैको माया गर्दैन । न नेपालीको वास्ता नै हुन्छ ।
हामी सुख खोज्ने कि खुसी भन्नेमा दोधार हुन्छौ तर यहाँ न खुसी न सुख कतै कुनै चिज भेटिन्न । मेट्रो चड्नु चिल्लो बाटो मात्र संसार हैन । समुन्द्र र पार्कमा महिनामा एकपटक पुगेर फोटो खिचेको झै पटक्कै हुँदैन । दिनमा १४ घण्टा अर्काले लदाएर काम गर्दा,बिरामी भएर बिस्तारामा पल्टिने बेला काममा नआए निकाल्दिने धम्की,काम बिग्रे तलबबाट पैसा काट्ने, खाने सुत्ने समय नहुँने, मध्यरातमा विस्तारामा लगेर ज्यान फालेसी दुख्दा बल्ल आउँछ नेपालको झल्को । गाउँघरमा हल्लिएर हिँडेको ।
जिन्दगी के हो बुझ्न विदेश जाने हो । यो भनी रहँदा तपाईं किन उतै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । सम्झिनुस घर छोडदा लागेको ऋण तेस्को ब्याज तिर्न, ऋण सकियो एउटा झुप्रो बनाउने रहर कस्लाइ हुन्न ? बाबुआमा, घरपरिवार इस्टिमित्र सबैको चित्त बुझाउन पर्यो मरिमरी काम गरेर महिनामा ३०÷४० हजार बच्दा घर कसरी फर्किन्छ ?
फरक संस्कार ः
हामी एकादशी, पूर्णिमा, औशी, दशै, तिज, तिहार, दियालो, माघे सक्रान्ती भनेर हुर्किइऔं । अर्मपर्म, कुटोकोदालो, दाउरा घाँस, ठेकी, मदानी,नेति, हलोजुवा जानियो बुझियो । तर अब म युरोपमा छु भोली बाध्यताले पनि ‘पिआर’को लोभ लाग्छ । श्रीमती छोराछोरी बोलाउन पर्छ ।जन्मदै रक्सी र गाइको मासु सङ हुर्किएको यहाँको संस्कार कसरी भन्छन् एकादशी र पूर्णिमा ।
न यहाँ दशै को रहर न यहाँ तिहारको । हरदिन उस्तै यतैको नागरिकता यतै को संस्कार । भोली मेरो छोराले मेरै अगाडि हातमा चुरोट र रक्सी बोकेर घर पस्ला । मेरी छोरी म बाहिर बसिरहँदा बाबा व्याइफ्रेण्ड भन्दै कोठामा लगेर चुक्कुल लगाउँली । त्यो टुलुटुलु हेर्नु बाहेक मेरो अर्को बोल्ने शब्द हुदैन किनकी म युरोपमा छु ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जापानी सम्राटको शुभराज्याभिषेकमा भाग लिने
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा पहिरो, वैकल्पिक बाटो रोज्न आग्रह